ကာလတာရှည် ကြို့ထိုးခြင်းသည် လေဖြတ်ခြင်း၏ လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင် - Hello Sayarwon
သင့်အနေဖြင့် ကြို့ထိုးခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်းသည် ဆက်စပ်မှု့ မရှိသော အကြောင်းအရာ တစ်ခုဟု သင်ထင်နေပါသလား။ သင်ထင်မြင်ချက်မှန်မမှန် အောက်ပါဆောင်းပါးကို ဆက်လက်ဖတ် ရှူပါ။
ကြို့ထိုးခြင်းသည် ရင်ဝမ်းခြားမြှေး၏ စိတ်ထိန်းချုပ်မှု့ မရှိဘဲ ရုတ် တရက် လှုပ်ရှားမှု့ကြောင့် ဖြစ်ရပါသည်။ ရင်ဝမ်းခြားမြှေးသည် အ ဆုတ်၏ အောက်ခြေတွင် ကပ်နေသော ကြွက်သားအပြားကြီး ဖြစ် ပါသည်။ နံရိုးကြားကြွက်သား များနှင့်အတူ အသက်ရှူခြင်း လုပ် ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ရင်ဝမ်းခြားမြှေး၏ လှုပ်ရှားမှု့ကြောင့် အ သံကြိုးကို ရုတ်တရက် လှုပ်ရှားစေပြီး ကြို့ထိုးသံဖြစ် စေပါသည်။ အများအားဖြင့် ကြို့ထိုးခြင်းသည် ဘာမှလုပ်ရန် မလိုဘဲ မိနစ်အ နည်းငယ်အတွင်း ပျောက်ကင်းပါသည်။ လူအများစုသည် အနည်း ဆုံး တသက်တကြိမ် ကြို့ထိုးဖူးပါမည်။ သို့သော် ၄၈နာရီထက် ပို၍ ကြို့ထိုးခြင်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ဆေးကုသမှု့ ခံယူရန် လိုအပ်ပါမည်။
ရက်သတ္တပတ်ပေါင်း များစွာ ကြို့ထိုးနေခြင်းသည် လေဖြတ်ခြင်း အပါအဝင် ရောဂါအခံ တစ်မျိုးမျိုး ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ကြို့ထိုးမပျောက်ပါက အခြား လေဖြတ်လက္ခဏာများကို ရှာဖွေပါ။
မျက်စိတဖက်တည်း သို့မဟုတ် ၂ဖက်လုံး ရုတ်တရက် ကြည့် မကောင်းသော ပြဿနာ
ရုတ်တရက် ဖြစ်လာသော လမ်းလျောက်စဉ် မူးဝေခြင်း၊ ဟန် ချက်မညီခြင်း
ရုတ်တရက် ပြင်းထန်စွာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း
စကားပြောခက်ခဲခြင်း – ရုတ်တရက် စကားမပီတော့ခြင်း၊ စကားကို စာကြောင်းအပြည့်/ အဓိပ္ပါယ် ပေါ်အောင် မပြောနိုင်တော့ခြင်း
ထုံကျင်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် လက်မောင်းမကြွ နိုင်တော့ခြင်း
မျက်နှာတတစ်ခြမ်းရွဲခြင်း၊ ပုံမှန်အတိုင်း မပြုံးနိုင်တော့ခြင်း
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သလိုပင် ကြို့ထိုးခြင်းသည် လေဖြတ်ခြင်း၏ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည့် အတွက် ဆရာဝန်နှင့် ပြသတိုင်ပင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကြို့ထိုးရခြင်းတွင် အများအားဖြင့် တိကျသော အကြောင်းရင်း သိပ်မရှိတတ်ပါ။ လူတိုင်းလူတိုင်း တစ်ကြိမ်မဟုတ် တစ်ကြိမ်ကြုံ တွေ့နိုင်ပါမည်။ ကာလတို ကြို့ထိုးခြင်း၏ အခြားသော အကြောင်းရင်းများမှာ
အပူအအေး မမျှတခြင်း (လေအေးပေးစက် ပိတ်လိုက်ခြင်း၊ ပူသော အရည်/အစာ စားပြီးပြီးချင်း အေးသော အရည်/အစာ စားလိုက်ခြင်း
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ တခုခု တွေ့ကြုံရခြင်း (စိတ်ဖိစီးမှု့၊ ကြောက် လန့်ခြင်း)
ကာလတို ကြို့ထိုးခြင်းသည် အများအားဖြင့် ဆေးကုသရန် မလိုအပ်ပါ။ ကာလရှည် (၄၈နာရီထက် ပို၍) ကြို့ထိုးခြင်းသည် အောက်ပါ အခြေအနေများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကဲ့သို့ အသက်ရှူ လမ်ကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ
ကြောက်ခြင်း၊ သွေးလန့်ခြင်း စသော စိတ်အခြေအနေများ
ဆီးချို၊ သွေးတွင်းသကြားဓါတ် မမှန်ခြင်းစသော ဇိဝရုပ် ဖြစ်ပျက်မှု့ ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
ဦးနှောက်ထိခိုက်မှု့၊ ဦးနှောက်အကျိတ်စသော ဗဟိုအာရုံ ကြောစနစ်ကို ထိခိုက်စေသော အခြေအနေများ
မေ့ဆေး/ထုံဆေးပေးသော ဆေးများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ Benzodiazepines ၊ methyldopa စသောဆေးများ သုံးစွဲနေခြင်း
ကြို့ထိုးခြင်းသည် ပုံမှန်ပြဿနာ တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကာလရှည် ဖြစ်ခြင်းသည် လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော ရော ဂါများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကာလရှည် ကြို့ထိုးနေ ပါက ဆရာဝန်နှင့် သေချာစွာ ပြသရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ သင်အနေဖြင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးမှား မဖြစ်မီ ကာကွယ်နိုင် မည် ဖြစ်ပါသည်။
Stroke. https://medlineplus.gov/stroke.html. Accessed May 9, 2017.
Stroke. http://www.nhs.uk/conditions/Stroke/Pages/Introduction.aspx. Accessed May 9, 2017.
Hiccups. https://medlineplus.gov/hiccups.html. Accessed May 9, 2017.
Hiccups. https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/hiccups. Accessed May 9, 2017.
Chang F-Y, Lu C-L. Hiccup: Mystery, Nature and Treatment. Journal of Neurogastroenterology and Motility. 2012;18(2):123-130. doi:10.5056/jnm.2012.18.2.123.